Zezika Granulator Factory | Mpanamboatra Granulator Zezika China, Mpamatsy
ny New Type Organic & NPK Compound Fertilizer Granulator Machine dia karazana masinina fanodinana akora vita amin'ny vovoka ho lasa granules, mety amin'ny vokatra atiny misy azotaona avo toa ny zezika vovo-organika sy anorganika.
ny Granulator zezika voajanahary karazana & fitambarana karazany vaovao Ampiasao tanteraka ny hery aerodynamika ateraky ny hery mandrisika haingam-pandeha haingam-pandeha ao anaty varingarina mba hampifangaroana hatrany ny fitaovana tsara, granulation, spheroidization, extrusion, collision, compact ary hampatanjaka, ary lasa granules ihany.
ny Disc Organizer & Compound Granulator zezika Masinina (fantatra amin'ny anarana hoe takelaka baolina) dia mandray ny firafitry ny arc boribory iray manontolo, ary ny tahan'ny granulate dia mety hahatratra 93% mahery.
Granulator Rotary Drum (fantatra koa amin'ny anarana hoe amponga fanaovana balafomanga, pelletizer rotary na granulator rotary) dia fitaovana malaza be izay afaka manodina akora betsaka. Ny fitaovana dia matetika ampiasaina amin'ny famokarana zezika marobe amin'ny zezika, hafanana, fifantohana avo lenta ary fifantohana ambany. Ny milina dia manana tombony amin'ny baolina avo mamorona tanjaka, kalitao miseho tsara, fanoherana ny harafesina, fanjifàna angovo ambany ary androm-piainana maharitra. Herinaratra kely, tsy misy fako telo, fandidiana milamina, fikojakojana mety, fisehon'ny fizotrany, teknolojia mandroso, vidin'ny famokarana ambany. Rotary Drum Compound Fertilizer Granulator no ampiasaina rehefa aglomeration - ilaina ny dingan'ny simika.
ny Masinina Granulator Extrusion Fertilizer Extrusion Flat Ampiasaina indrindra amin'ny famolavolana zezika, ny granules izay soloin'ny masinina dia manana faritra madio sy madio, hamafin'ny antonony, fiovan'ny mari-pana ambany mandritra ny fizotrany ary afaka mitazona tsara ny otrikaina amin'ny akora.
Ny tsy fanamainana Roll Extrusion Compound Fertilizer Granulator manana fahaiza-mampifanaraka avo amin'ny akora, afaka mamokatra granula 2.5mm ka hatramin'ny 20mm ary tsara ny granule, afaka mamokatra karazan-tsakafo sy karazany maro (ao anatin'izany ny zezika biolojika, zezika anorganika, zezika biolojika, zezika andriamby, sns.)
Ny masinina Granulator Extruding Granulator manana tombony amin'ny fampisehoana azo itokisana, taha ambony amin'ny famolavolana granule, fahaiza-mampifanaraka amin'ny fitaovana, mari-pana miasa ambany ary tsy misy simba amin'ny otrikaina ara-nofo. Ampiasaina betsaka amin'ny pelleting ny feed, zezika ary indostria hafa.
Granulator zezika biolojika karazana vaovao dia ampiasaina amin'ny famolavolana sombin-javatra boribory mivantana amin'ny alàlan'ny fampiasana ny karazan-javatra organika rehetra aorian'ny fermentation sy crushing.